“Haddii Barcelona ay ila soo xiriirto isla barri ayaan ku laabanayaa” – Dani Alves – Gool FM
“PSG ama Real Madrid, waxaan filayaa Mbappé inuu heli doono Ballon d’Or.” – Arsene Wenger
“Haddii Barcelona ay ila soo xiriirto isla barri ayaan ku laabanayaa” – Dani Alves
Liibaan Fantastic April 23, 2018
(Paris) 23 Abriil 2018 Daafaca PSG ee Dani Alves ayaa sheegay in Barcelona ay tahay gurigiisa isla markaana uu diyaar u yahay inuu ku laabto waqti walba.
Dani Alves ayaa labo xiliciyaareed ka hor ka tagay Barcelona, wuxuuna ku biiray Juventus isaga oo kadib uga sii tilaabay kooxda PSG oo haatan uu joogo.
Wuxuu sheegay inuu dib ugu laabanayo kooxdiisii hore haddii ay la soo xiriirto, wuxuuna meesha ka saaray inuu jiro isku dhac u dhexeeya isaga iyo Barcelona.
34 jirkaan oo la hadlay Fox Sports ayaa yiri:
“Barcelona waa gurigayga, waa wax aan dhici karin inaan iraahdo kuma laabanayo Barcelona, haddii ay ila soo xiriiraan isla barri ayaan ku laabanayaa”.
“Been ayaan sheegay haddii aan iraahdo ka ma xanuunsan ka tagidii Barca, waxaan rumaysanahay inaan inbadan u dagaalay sidii aan taariikh cajiib ah ugu samayn lahaa Barcelona iyo natiijooyin kooxdu xitaa aysan filayn”.
“8-sano gudahood ayaan la qaaday 23-koob, laakiin ma aysan ixtiraamin taariikhdaydii kooxda, waxayna gaareen heer ay iga codsadaan inaan macsalaameeyo taas oo aan diiday waayo Barcelona waa gurigayga”.
“Marka meel aad u aragto inuu gurigaaga yahay looma baahna inaad macsalaamayn uga tagto, sideed u macsalaamaynee adiga oo dib ugu soo laabanaya”.
Edin Džeko Oo Ka Warbixiyay Awooda Ay Ku Tiirsan Tahay Kooxda Liverpool, Kahor Kulanka Champions League